Taliska Scratchpad: Habka Ugu Dhaqsaha Badan ee Loogu Heli Karo Looguna Cusboonaysiiyo Istaraatiijiyadda Macaamiil Kasta oo App Web ah | Martech Zone
Maamulayaasha xisaabaadka ee ku dhowaad dhammaan ururada iibka waxay ku qulqulayaan qalab iibin aad u tiro badan oo aan laga baahin iyaga CRM. Tani waxay ku qasbeysaa dadka wax iibiya inay galaan shaqo waqti-qaadasho iyo daal badan oo marin-u-socodka iyo dib-u-socoshada u dhexeysa aaladaha, maareynta daraasiin tab ah biraawsar, guji keligood ah, iyo koobiyeynta daaliska iyo daalidda, dhammaantood iyagoo isku mar isku dayaya inay cusbooneysiiyaan Salesforce. Natiija ahaan, waxaa hoos u dhacay waxtarka maalinlaha ah, waxsoosaarka, iyo, ugu dambeyntiina, waqtiga dadka wax iibiya ay ku qabsadaan shaqooyinkooda — iibiyaan.
Taliska Scratchpad ayaa bilaabay, furitaanka habka ugu dhaqsaha badan ee iibiyayaashu ay ku heli karaan kuna cusbooneysiin karaan qoraalkooda iibka, howlaha, iyo Salesforce, barnaamij kasta oo websaydh ah ama bulshada iibka ah - bilaash.
Ka dib markii aan si toos ah ula hadlay kumanaan ka mid ah hawlwadeennada xisaabaadka ee ka socda ururada iibka ee dhammaan noocyada kala duwan, waxaan ogaanay inay ku qaataan in ka badan kala bar waqtigooda cusbooneysiinta Salesforce halkii ay iibin lahaayeen. Maamulayaasha xisaabaadka waxay si fudud u rabaan inay cusbooneysiiyaan Salesforce si deg deg ah iyadoon la beddelin macnaha guud oo aan la jebin shaqadooda, si ay ula yeelan karaan wadahadal badan macaamiisha ayna u xiraan heshiisyo badan Taliska 'Scratchpad Command' wuxuu u suurta geliyaa isticmaale kasta oo Salesforce ah oo Dunida jooga inuu sameeyo cusbooneysiinta lagama maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin, degel kasta, iyadoon laga beddelin tabs, bilaash ah. Waa dhakhso. Way fududahay. Waana wax lagu farxo in la isticmaalo.
Pouyan Salehi, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda Scratchpad
Iyada oo la adeegsanayo Taliska 'Scratchpad Command', hal guji, isticmaaleyaashu waxay abuuri karaan xiriir cusub, koonto, fursad, hawl, ama waxqabad isla markaana ay cusbooneysiin ku sameyn karaan goob kasta oo caado ah ama shay ku yaal Salesforce. Maamulayaasha xisaabaadka ayaa abuuri kara, cusbooneysiin kara isla markaana isku dubbaridi kara qoraalada heshiiska muhiimka ah meel kasta, iyagoo tirtiraya baahida loo qabo in waligood si toos ah looga galo Salesforce, laga boodo inta udhaxeysa qalabka kale ee iibka, ama lagu cusleeyo iyadoo la koobiyeeynayo lagana dhajinayo hal cod mid kale.
Taliska 'Scratchpad Command' sidoo kale waa loo adeegsan karaa halka ay maamulayaasha koontada ay ku dhexjiraan bulshooyinka iibka, iyagoo ka caawinaya inay cusbooneysiiyaan Salesforce halka ay kula xiriiraan asxaabtooda iyo asxaabtooda meel kasta oo internetka ah. Intaa waxaa sii dheer, hogaamiyaasha iibka waxay ka faa'iideystaan ​​helitaanka deg degga ah ee macluumaadka Salesforce ee cusbooneysiinta iyagoo ka shaqeynaya aaladaha saadaasha ay jecel yihiin iyo nidaamyada BI, ama dashboodyada warbixineed ee gudaha ee sida gaarka ah loo dhisay.
Macaamiisha ayaa rakibi kara Scratchpad sida a Ku xir koronto, ku xir Salesforce oo ku cusbooneysii dhuumahooda 30 ilbiriqsi ama ka yar. Scratchpad isla markiiba wuxuu ku xiraa Salesforce wuxuuna siiyaa dadka wax iibiya xiriir deg deg ah oo casri ah si ay ula falgalaan xogta iibkooda iyo qulqulka shaqada. Salesforce ayaa wali ah diiwaanka diiwaanka, halka Scratchpad ay u adeegto barta barta hawlgelinta ee kooxaha dakhliga ay ku raaxaystaan ​​isticmaalka.
Marka ay timaado wakiillada iibka, waxba kama dhawaaqaan run ka badan weedha waqti waa lacag. Oo markii waqtigaas (iyo lacagta) la jaro kala bar sababtoo ah waxqabad la'aanta ay keeneen dhammaan aaladaha iyo codsiyada loo maleynayo inay shaqooyinkooda ka dhigayaan kuwo ka sii wanaagsan, waa arrin ku saabsan shakhsiyaadka iibka oo keliya laakiin khadka hoose ee ururka . Taliska Scratchpad wuxuu u suurtageliyaa maamulayaasha koontooyinka inay si dhaqso leh oo hufan u maareeyaan dhuumaha dhuumahooda iyaga oo wata shaqooyin mideysan oo si fudud loo isticmaali karo, si ay dib ugu laaban karaan xiritaanka heshiisyo badan iyo inay saameyn weyn ku yeeshaan ganacsiga.
Nancy Nardin, Aasaasaha, Qalabka Iibinta Smart
Taliska Scratchpad hadda waa loo heli karaa freemium iyo isticmaaleyaasha lacagta la siiyaa.
Goob shaqo oo mideysan Scratchpad
Scratchpad waxay bixisaa goob shaqo oo midaysan inta udhaxeysa jadwalka taariikhda, iibka iibka, iyo Iibka. Markii ugu horreysay abid, maamule xisaabeed kasta, wakiilka horumarinta iibka (SDR), ama maareeyaha iibka ee adeegsanaya Salesforce ayaa marin u heli kara isla markaana abuuri kara qoraallo, ku dari kara oo kobcin kara xiriiro cusub, isla markaana si toos ah uga abuuri kara una maamuli kara kalandarkooda.
Kalandarka, barnaamijyada qaadashada qoraalka, hawlaha, iyo Salesforce waa qayb lagama maarmaan u ah maalin kasta oo wax iibiya, laakiin gabi ahaanba way ka go'een midba midka kale oo kuma habboona socodka shaqada iibiyaha. Muddo aad u dheer, xirfadleyda wax -iibinta ee urur kasta ayaa isku duubtay barnaamijyo aan kala sooc lahayn si ay u abuuraan goob shaqadooda iibinta shaqsiyeed. Khaladaadkan waxaa loo sameeyay si lama huraan ah iyada oo la isku dayo in la sii habeeyo, la maareeyo shirarka, la cusbooneysiiyo oo la wadaago qoraallada iibka, la raaco tallaabooyinka xiga, la dejiyo hawlaha, la hubiyo gacan -qabasho aan kala go 'lahayn, iyo in la iska kaashado kooxda dakhliga.
Sidaa awgeed, goobahan shaqooyinku waxay u baahan yihiin caajis iyo maareynta xogta gacanta, taasoo ku qasbaysa dadka wax iibinaya inay ku qaataan waqti aan u qalmin gelinta xogta halkii ay ka iibin lahaayeen macaamiisha. Xaqiiqdii, warbixin ka socota Salesforce ayaa shaaca ka qaaday in xirfadleyda iibka ee maanta ay ku qaataan kaliya boqolkiiba 34 wakhtigooda iibinta. Kooxaha RevOps iyo SalesOps ayaa sii wadaya inay koraan jahwareer maadaama nidaamyadan wadajirka ah ee la jabsaday aysan ku xirnayn isha xogta runta ah - Salesforce
Macluumaad dheeraad ah Ku dar kumbuyuutarka
Tags: plugin chromechrome googlegoogle chrome pluginNancy nardinPouyan Salehpouyan salehiiibinxoqanscratchpad amarkaqalabka iibinta smart